Balihoo: Yemunharaunda Kushambadzira Mashini Martech Zone
Balihoo: Yemunharaunda Kushambadzira Mashini
Chishanu, June 29, 2012 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Nhasi tanga tine Shane Vaughan panhepfenyuro redhiyo ichikurukura zvemuno zvekushambadzira michina. Shane ndeye CMO weBalihoo, kambani inopa yemunharaunda kushambadzira otomatiki masevhisi. Balihoo ndeyekushambadzira otomatiki chikuva iyo inoshandira emabhizimusi emakambani ane nharaunda yemunharaunda kushambadzira zvido, kunge mafranchise, kutengesa zvitoro, kana makambani ebasa emuno. Mienzaniso yakafanana 1800Doctors.com, Geico, MattressFirm kungodudza zvishomanana.
Teerera kune yedu Kubvunzana naShane Vaughan
Balihoo ndiye mutungamiri wekutanga weLocal Marketing Automation tekinoroji uye masevhisi kumarudzi emunyika ane zvemuno zvekushambadzira zvinodiwa. Balihoo inogonesa kushambadzira-kirasi kushambadzira padanho remuno uye kunopa emunyika mabrands kutaridzika kuzere mune ese emuno ekushambadzira zviitiko uye mhedzisiro.
Shane Vaughan pane Yemunharaunda Kushambadzira:
Balihoo anotsanangura izvo zvinodiwa uye mabhenefiti emuno ekushambadzira otomatiki:
Svitsa tarisiro padhuze nepotenga - Hunhu hwevatengi hwekutenga hwachinja. Iyo webhu yemuno iri kushandiswa kazhinji uye yakawanda midhiya mhando inosanganisirwa mune yakajairwa sarudzo yekuita maitiro. Yenharaunda otomatiki inogonesa emunyika mabrands kuchengetedza kutonga kwenguva refu mukutaurirana nekutengesa maitiro.
Bvisa kuvimba kune vanobatana veko uye vamwe - Tora yako yenyika kushambadza hunyanzvi uye kuigadzirisa. Svika kumisika zhinji yemuno nekuedza kwakawanda sekuita mushandirapamwe uye ain nzwisiso mumisika yemuno kuburikidza analytics saka unogona kunatsiridza nyika mushandirapamwe kudzoka pane kudyara.
Gamuchira nenguva, yakaunganidzwa mhedzisiro yekushambadzira kwenzvimbo - Shandisa zvemuno analytics kuziva mu-musika maitiro uye kugadzirisa nyika mishandirapamwe kuedza.
Kutsvaga uye zvemagariro vari kutyaira kushambadzira kwemuno zvakanyanya uye hazvina kukwana kuti aya makuru mabhurani ave nekuvapo kwenyika. Vatengi nemabhizinesi vari kutsvaga munzvimbo vachishandisa tsvakiridzo yakatarisana nenzvimbo. Kunyangwe pasina mazwi enzvimbo, injini dzekutsvaga dzinoshandisa kunongedza kwenzvimbo zvichienderana nenzvimbo yemushandisi… kana kufurirwa kuburikidza nesocial network. Mune mamwe mazwi, yakawanda yekutsvaga maitiro inotarisana nenzvimbo uye haigone kufuratirwa.
Balihoo inopa yemunharaunda rubatsiro webhusaiti, yakabatana kushambadzira, kushambadzira kwe-co-op uye kushambadzira, uye chivakwa chekushambadzira mune imwechete package inopa yemuno bhizinesi rekunze kugona kugona nyore kushandisa kwavo kushambadzira kushandisa uye kunzwisisa uko kudzoka kwekudyara kuri kuitika.
Tags: Balihookushambadzira kwemunoyemunharaunda kushambadzira michinalocal searchMarketingshane vaughan
Formstack: Wako Wenzvimbo's Client Credential Vault
Zvinotaurwa Neruvara Nezve Brand Yako